Valeria - Tsy mbola akaiky toy izany aho - Countdown amin'ilay Fanjakana
Ny Ramatoa "Ny reninao malahelo" ho	Valeria Copponi	amin'ny 21 Oktobra, 2020:
Ny zanako vavy, izaho dia, Maria Masina Indrindra amin'ny alahelo. Italiana: Maria Santissima Addolorata Ahoana no hahasambatra ahy amin'izao fotoana izao rehefa mijaly mafy ny zanako ?! Tsy mbola nanakaiky anao toy ny tamin'ireny fotoana ireny aho, saingy ho anao tsirairay avy dia misy fitsapana lehibe tsy maintsy resena. Mivavaha ary aza avela hatahotra an'izany rehetra izany ianareo; mieritrereta fa amin'ny faran'ny fahoriana dia hanana fifaliana tsy azo lavina ianao. Ady ity ady ity amin'ny maha-mahery fo anao, amin'ny maha-zanak'Andriamanitra marina anao, ary ny zava-drehetra dia hanjary sitrakao. Tsy hahafoy anao velively izahay: tohizo ny finoana ny fitiavana tokana an'Andriamanitra, ary mandehana amin'ny lalana izay hasehony anao tsirairay avy. Fantatrao tsara fa hitondra anao hanakaiky azy mandrakizay izany. Iza no mitovy amin'Andriamanitra? Mahereza, mivavaha ary manolora ny fisedrana anao, araka ny marina ny fandresenao amin'ireo fitsapana izay hitondra anao amin'ny fifaliana mandrakizay.
Tsy handao anao mihitsy aho: ankinina amiko ny fianakaviananao, ny fiangonana manontolo ary izao tontolo izao; eritrereto fotsiny ny fanaovana soa ary ho mora aminao ny handresy ny fitsapana rehetra. Avadika ambony ambany izao tontolo izao; izay tsara sy tsara dia manjary tsy afaka sy tsy hovelomina, fa miaraka aminao foana aho ary tsy hamela anao haratra mihoatra ny zakanao. Akaiky kokoa anao noho ny hatramin'izay Jesosy amin'izao andro izao; Tiany ianao ary noho ny Fitiavana dia nijaly Izy fa tsy hamela anao hijaly mihoatra ny zakanao sy zakao. Akaiky anao aho; ankino amiko amin'ny fonao rehetra ny tenanareo mba hanananareo ny hery izay azoko tamin'ny fotoana nanomboana ahy tamin'ny hazofijaliana. Mitso-drano anao aho, tiako ianao ary homeko anao ny tanjaka ilainao.
Ny reninao malahelo.
↑1 Italiana: Maria Santissima Addolorata
← Vavolombelona mpaminany
Pedro Regis - Babela Lehibe… →